Alahady Paka - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2015-02 mpandimby ny Magazine > Easter Day
Inona no dikan'izany sy ny maha-zava-dehibe ny Herinandron'ny Herinandro? Manantena aho fa hanampy anao hiomana amin'ny fankalazana ny herinandron'ny herinandro masina ity lahatsoratra ity izay mahery vaika amin'ny fanehoana ny vaovao tsaran'i Jesosy Kristy, Tompontsika.
Ny antsipirian'ny Alahadin'ny Paska dia matetika miady hevitra: ny fizotry ny fotoana sy ny fanontaniana hoe hankalaza ny Paska na tsia (satria maro ny fomban-drazana avy amin'ny mpanompo sampy). Mety ho tadidin’ireo mpiangona zokiolona ao amin’ny Fiangonan’Andriamanitra Maneran-tany (Grace Communion International) fa nanana taratasy mivalona momba izany mihitsy aza isika.
Na izany aza, ny ankamaroan'ny mpirahalahy ankehitriny dia mino fa ny fankalazana ny fitsanganan'i Jesosy dia tsy mifanditra mihitsy. Farany, amin'ny Paka, ny fon'ny filazantsara dia nambara tamin'ny fankalazana ny fotoana lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny olombelona. Hetsika ifotony ho an'ny olona rehetra niaina. Ny hetsika no mahatonga ny fahasamihafana eo amin'ny fiainantsika, ankehitriny sy mandrakizay. Mampalahelo fa ny fankalazana ny Paka dia matetika ny dikan'ny filazan-dalàn'ny filazantsara momba ny fifanakalozana izay mahafa-po amin'ny fikatsahana manokana sy ny fahatanterahan'ny tsirairay. Ny hevitra toy izany dia milaza izao manaraka izao: manao ny anjaranao ary Andriamanitra no hanao ny anjarany. Raiso i Jesosy ho Mpanavotra anao, ka mankatò azy, ary ho valin'izay dia hamaly anao eto Andriamanitra ankehitriny ary hanomezany anao miditra amin'ny fiainana mandrakizay. Toa milamina be ilay izy, sa tsy izany?
Marina fa nalain'Andriamanitra ny fahotantsika ary raha manome antsika ny fahamarinan'i Jesoa Kristy dia hahazo fiainana mandrakizay. Na izany aza, tsy inona izany fa ny fifanarahana barter. Ny vaovao tsara dia tsy resaka fifanakalozana fifanakalozana sy serivisy eo amin'ny antoko roa. Ny fivarotana ny filazantsara ho toy ny varotra dia mamela fahatsapana diso ho an'ny olona. Amin'izany fomba fiasa izany dia mifantoka amintsika. Na manaiky ilay fifanarahana na tsia isika, na mahazo vola na tsia, na manontany tena isika raha ilaina ny ezaka. Ny fanapahan-kevitra sy ny ataontsika dia ao afovoany. Fa ny hafatra amin'ny Paka dia tsy ny momba antsika ihany, fa momba an'i Jesosy. Izany dia momba ny hoe iza izy ary nanao ho antsika.
Miaraka amin'ny fankalazana ny Herinandron'ny Andro Masina, ny alahady Paska dia lisitry ny tantaran'ny olombelona. Ireo hetsika dia nitazona ny tantara. Ny olombelona sy ny famoronana dia alefa amin'ny làlana vaovao. Miaraka amin'ny fahafatesan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy, niova ny zava-drehetra! Ny Paska dia mihoatra lavitra noho ny fanoharana amin'ny fiainam-baovao izay anambarana amin'ny atody, bitro ary fomba fiasa vaovao amin'ny lohataona. Ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia mihoatra lavitra noho ny fahataperan'ny asa nataony teto an-tany. Ny zava-niseho tamin'ny alahady Paska dia nanambara ny vanim-potoana vaovao. Nisy dingana vaovao tamin'ny asan'i Jesosy nanomboka tamin'ny Paska. Izao dia manasa ny olona rehetra manaiky an'i Jesosy ho Mpamonjy azy manokana i Jesosy ankehitriny, ho isan'ireo ministera azy ary hanambara ny vaovao mahafaly amin'ny fiainana vaovao izay entin'i Kristy ho an'ny zanak'olombelona rehetra.
Ireto ny tenin’ny apostoly Paoly ao 2. Korintiana:
Izany no antony mahatonga antsika tsy mahalala olona hihinan-kena intsony; ary na dia nahafantatra an'i Kristy araka ny nofo aza isika, dia tsy fantatsika toy izany intsony. Noho izany: raha misy ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; Lasa ny taloha, indro, lasa vaovao. Fa Andriamanitra rehetra, izay nampihavana antsika tamin'ny tenany tamin'ny alàlan'i Kristy ary nanome antsika ny birao mitory fampihavanana. Fa tao amin'i Kristy Andriamanitra ary nampihavana izao tontolo izao taminy ary tsy niisa ny helony taminy ary nanangana ny teny fampihavanana teo amintsika. Koa ankehitriny dia iraka mpitondra an’i Kristy isika, satria mamporisika antsika Andriamanitra; Ka raha tokony Kristy, dia mangataka izahay: avelao isika hihavana amin'Andriamanitra! Satria Izy nanao ilay tsy nahalala ota ho ota hamonjy antsika, mba ho lasa fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra isika.
Amin’ny maha-mpiara-miasa anay anefa dia mananatra anareo izahay mba tsy handray foana ny fahasoavan’Andriamanitra. “Fa Izy no miteny (Isaia 49,8): “Nihaino anao tamin’ny andron’ny fahasoavana Aho ary nanampy anao tamin’ny andro famonjena.” Indro, izao no fotoan’ny fahasoavana, indro, ankehitriny no andro famonjena!2. Korintiana 5,15-6,2).
Efa hatrany am-piandohana dia fikasan'Andriamanitra manavao ny olombelona ary ny fahatongavan'ity drafitra ity dia ny fananganana an'i Jesosy Kristy. Ity hetsika ity tokony ho 2000 taona lasa izay dia nanova tantara, ankehitriny ary ho avy. Androany miaina amin'ny fotoanan'ny fahasoavana isika ary fotoana iray izay iantsoana antsika, amin'ny maha-mpanara-dia an'i Jesôsy antsika, mba hanana misiônera ary hanana fiainana misy dikany sy misy dikany.